ငါသည်သင်တို့ကိုဤအချက်အလက်ပို့စ်တင်တန်ဖိုးထား - ငါ REST အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓိပ်ပာယျကိုသိလို! 🙂
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ (နောက်ဆုံးတော့!) ဒီယခင်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသံအတိုကောက်အားလုံးဆိုလိုတာက၏အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်သုံးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ result = ဒီကျောင်းသားတည်ဆောက်သူအတွက်အနည်းငယ်တောက်ပနေတဲ့အနာဂတ်။
Vic မင်္ဂလာပါ။ အဆိုပါစကားလုံးများကိုကြောက်စရာဖြစ်ကြသည်။ ပထမဆုံး API ကိုတောင်းဆိုဖို့ပရိုဂရမ်ရေးထားတာကိုမှတ်မိပြီးအဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်